Guriga Smart - Pandawill Technology Co., Ltd.
Otomaatiga guriga waa kordhinta degenaanshaha otomaatiga dhismaha. Waa qalabaynta guriga, shaqada guriga ama howlaha guriga. Aaladda otomaatiga ah waxaa ka mid noqon kara kontoroolka dhexe ee laydhka, HVAC (kululaynta, hawo-siinta iyo qaboojiyaha), qalabka, qufullada amniga ee albaabbada iyo albaabbada iyo nidaamyada kale, si loo helo habboonaan, raaxaysi, waxtarka tamarta iyo amniga. Qalabaynta guryaha ee waayeelka iyo naafadu waxay siin kartaa nolol tayo sare leh dadka laga yaabo inay u baahdaan daryeel bixiyeyaal ama daryeel hay'adeed.
Caan ka ahaanshaha otomatiga guryaha ayaa si aad ah u kordhayay sanadihii la soo dhaafay sababtoo ah awood aad u sarreysa iyo fudeyd iyada oo loo marayo taleefannada gacanta iyo kiniiniga. Fikradda "Internetka Waxyaabaha" waxay si dhow ugu xidhan tahay soo saarista otomaatiga guryaha.
Nidaamka otomatiga guriga wuxuu isku daraa aaladaha korantada ee guri ku yaal midba midka kale. Farsamooyinka loo adeegsado otomatiga guriga waxaa ka mid ah kuwa dhismaha otomaatiga ah iyo sidoo kale xakameynta howlaha gudaha, sida nidaamyada madadaalada guriga, dhirta dhirta iyo waraabinta ardaaga, quudinta xayawaanka, bedelida jawiga jawiga dhacdooyinka kala duwan (sida casho ama xaflado) , iyo adeegsiga aalado rooti ah. Aaladaha waxaa laga yaabaa inay ku xirmaan shabakad guri si ay ugu oggolaadaan kumbuyuutar shaqsiyeed, waxayna u oggolaan karaan marin ka fog internetka. Iyadoo loo marayo isdhexgalka tikniyoolajiyadaha macluumaadka deegaanka guriga, nidaamyada iyo aaladaha ayaa awood u leh inay ku wada xiriiraan qaab isku dhafan kaas oo keena ku habboonaanta, waxtarka tamarta, iyo faa'iidooyinka amniga.